प्रवक्ता परिवर्तनको अर्थ
आयोमेल संवाददाता काठमाडाैं - सोमबार, जेठ २६, २०७७
नेपालमा कोरोना कहर सुरुसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राेग नियन्त्रण तथा रोकथामका सन्दर्भमा दैनिक लाइभ अपडेट थालेको थियो। यो अपडेटको पर्याय बनेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जेठ २५ गते आफू प्रवक्ता भएर उपस्थित हुने अन्तिम पत्रकार सम्मेलन भने।
यसको अर्थ जिम्मेवारी परिवर्तन थियो। प्रशासन संयन्त्रमा कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर सामान्य विषय हो। तर, सञ्चारमाध्यमले उनको जिम्मेवारी हेरफेरलाई अस्वाभाविक भनेर टिप्पणी गरे। नयाँ प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमलाई विगत र कुनै दलविशेषको झुकावसँग जोडेर हेरियो। आशंका सत्य नभए पनि परिक्षणको विषय हो। सरकारले महामारीको सूचनामा बन्देज लगाउन वा कामको मात्र वकालत गर्ने व्यक्तिको खोजीमा मात्र प्रवक्ता परिवर्तन गरेको भए त्यो दुर्भाग्य हुनेछ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २६, २०७७